Mid kamid ah Wasiiradii ugu dhawaa RW Khayre oo is casilay. | XAL DOON
Home NEWS Mid kamid ah Wasiiradii ugu dhawaa RW Khayre oo is casilay.
Mid kamid ah Wasiiradii ugu dhawaa RW Khayre oo is casilay.
C/kariin dhalac oo ah Wasiir Kuxigeenka Xanaanada Xoolaha dhirta iyo Daaqa ee Xukuumadda Soomaaliya, ayaa Caawa ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkii uu ka hayay Xukuumada Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre.
Qoraal uu goordhow bartiisa Facebook soo dhiga ayuu ku sheegay in sbabata uu go’aankan u qaatay ay tahay markii uu u adkeysan waayay fara gelinta joogtada ah ee Xukuumada ku heysa dhismaha Galmudug, isagoo dhaliilay hanaanka haatan dowladda ku wajaheyso maamulka cusub dhismihiisa.
C/kariin dhalac, ayaa dhinaca kale fariin u diray Madaxda dowladda Soomaaliya, isagoo ka dalbaday iney dastuurka dalka u yaala ku dhaqmaan.
Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa la soo sheegayaa inuu si aad ah uga carooday go’aanka uu qaatay Dhalac, waxaana la soo sheegayaa inuu diyaarinayo qofkii uu durba booskiis aku bedeli lahaa, iyadoo saacadaha soo socdo la sugayo warqad Wiifto oo magacaabis ah.
Halkan Hoose ka aqriso Qoraalka Xildhibaanka:
Anigoo ah Xildhiban Cabdikarim khalif Cabdi (Dhalac) maanta oo taariikhdu tahay 20.09.20019 waxaan Go’aansaday inaan iska Casilo Xilkii aan ka hayey Xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ahaa Wasiir- kuxigenka Wasaarada Xanaanada Xoolaha dhirta iyo daaqa.
Sababaha aan isku casiley waxaa ka mid ah.
Waxaan ku qanci waayey feragelinta Dowladdu ku heyso Dowlad Goboleeyadda dalka Ka jira, gaar ahaan Maamulka Galmudug oo ay hadda ka socoto qaban qaabo maamul u sameyn baal marsan rabitaanka dadka reer Galmudug ‘ iyo Dasturka dalka uyaal.
taasoo keeni karta dib u dhac siyaasadeed, dhaqaale , amni iyo mid hurumarineed.
sidoo kale waxay keeni kartaa kala fogeeynta labadii gobal ee ku midoobey dowlad gobaleedka Galmudug Kuwaas kala ah mudug iyo galgaduud.
Waxaan halkaan baaq uga dirayaa
1 Xukuumada federalka iney ilaaliso
Dastuurka dalka iyo nidaamka federalkanee Somali ku heshiisey faragalintana ay ka daayaan dhismaha dowlad gobaleedyada.
2 Waxaan kaloo ayagana baaq udirayaa dowlad gobaleeda dalka Ka jira iney xil iska saaraan ilaalinta shuruucda dalka utaal oo dastuurku ugu horeeyo Iyo nidaamka federalismKa ee ay ku dhisan yihiin.
3 sidoo kale waxaan kula talinayaa dadka reer Galmudug inay ilaashadaan midnimadooda iyo wada jirkooda, Ayna ka fekertaan qofka ay ku aaminayaan aayahooda.
Waxaan ugu horeeyn u mahad celinaayaa R/wasaaraha Xukuummadda mudane Xasan Cali Kheyre ‘ iyo golaha wasirada ee aan saaxiibada nahey mudadii aan wada shaqeyney.
Ugu dambeeyntii waxaan balan qaadayaa inaan ka shaqeyn doono midnimada iyo wanaaga ummadda soomaaliyeed, sidoo kale waxaan si dhow ula socon doonaa maslaxada dadka aan ku matalo golaha shacabka
Ciidamada Xoogga dalka oo sarkaal Shabaab ah ku dishay gobolka Sh.Hoose.
Garoonka Muqdisho oo dib shaqadii u bilaabay iyo xal laga gaaray murankii…..